Announcement - Rohto Myanmar
Rohto Myanmar > Announcement
Acnes Buy One Sealing Gel Get Creamy Wash Promotion
Acnes ချစ်သူများအတွက် September လအတွင်း အထူးPromotion များပေးနေပါပြီ။
Acnes 30% Off Promtion
Acnes ချစ်သူများအတွက် September လအတွင်းအထူး Promotion လေးစတင်နေပြီနော်
Buy Any Acnes & Others Rohto Products (10,000 Ks) Get One Promotion
Acnes ချစ်သူများအတွက်အတန်ဆုံးနဲ့အမိုက်ဆုံး Promotion လေးတစ်ခုထပ်ပြီးရောက်ရှိလာပြီနော်
Rohto Product ချစ်သူတိုင်း တန်မှတန် တဲ့ အလန်းစား လျော့ဈေးများြ ဖင့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၃ ရက် အတွင်း Shop.com ကနေ အော်ဒါတင်နိုင်ပါတယ်
CMO တွင် Hada Labo ပရိုမိုးရှင်းများ ပေးနေပါသည်
Hada Labo ချစ်သူလေးတွေအတွက် CMO တွင် ပုံမှာပြထားတဲ့ products များမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုဝယ်ယူတိုင်း ၃၀ရာခိုင်းနှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ (၃၁ .၈ . ၂၀၂၁) အထိဖြစ်ပါတယ်။
City Mall Online တွင် Rohto ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Acnes, Sunplay, Remos & Scar Z တို့အား ပရိုမိုးရှင်းများပေးနေပါသည်
Rohto products ချစ်သူလေးတွေအတွက် CMO တွင် ပုံမှာပြထားတဲ့ products များမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ product တစ်ခုဝယ်ယူတိုင်း ၄၀ရာခိုင်းနှုန်း အထိ ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ (၃၁ .၈ . ၂၀၂၁) အထိဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Acnes ထုတ်ကုန် (၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် သော့ချိတ်အသုံးပြုနိုင်သောကြည့်မှန် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
မန္တလေးမြို. Diamond Center ရှိ ROHTO Boot နှင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိ အလှကုန် အရောင်းကောင်တာများတွင် Acnes ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ် များပေးလျက်ရှိပါသည်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Acnes ထုတ်ကုန် (၁၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် သော့ချိတ်အသုံးပြုနိုင်သောကြည့်မှန် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ (၅.၅.၂၀၂၁) မှ (၃၁.၅.၂၀၂၁) အထိဖြစ်ပါတယ်။